Gwara mmanụ, Puffer Jaketị, ngwakọ Jaketị - Senkai
Womenmụ nwanyị na-eme mmiri na-ekpuchi jaket n'èzí 9220306
Description: Women kpuchiri ihe n'ihu padding n'èzí jaket bụ waterproof na windproof. Iguzogide shei siri ike na okpu zuru oke na-echebe gị pụọ na nkwụsị na saturation. Threadened 100% polyester gwara mmanụ inyom ịdọ n'èzí jaket na-eme ka ị na-ekpo ọkụ. Igwe a na-edozi anya na ihe mkpuchi nwere ike inye aka igbochi ifufe ma jikwaa ihu igwe oyi dị mfe, dị ka mmiri ozuzo, igwe ojii ma ọ bụ ụbọchị snow. Uwe aka ya bara uru maka ndu ubochi .Ọ zuru oke maka ejiji kwa ụbọchị, dị ka ski, snowboa ...
Nwanyị na-ekpuchi jaket na-enweghị mmiri 9220314
Nkọwa: Nwanyị na-ekpuchi jaket na-enweghị mmiri na-ekpo ọkụ ma na-ekpuchi ikuku. Iguzogide shei siri ike na okpu zuru oke na-echebe gị pụọ na nkwụsị na saturation. Threadened 100% polyester gwara mmanụ inyom ịdọ n'èzí jaket na-eme ka ị na-ekpo ọkụ. Igwe a na-edozi anya na ihe mkpuchi nwere ike inye aka igbochi ifufe ma jikwaa ihu igwe oyi dị mfe, dị ka mmiri ozuzo, igwe ojii ma ọ bụ ụbọchị snow. N'akpa uwe aka 2 na akpa akpa 1 dị mma maka ndụ kwa ụbọchị .Ọ dị mma maka ejiji kwa ụbọchị, dị ka ski, snowb ...
Women'smụ nwanyị na-agba aji ajị anụ jaket ngwongwo 17930
A na-eji jaketị ajị anụ ajị anụ nke ụmụ nwanyị si na 100% polyester ajị anụ nwere ihu ihu ajị anụ na 100% naịlọn, enweghị nkasi obi anaghị akwụ ụgwọ. Nkume ma ọ bụ Heather Obsidian, ụda olu ndị a na-arụ ọrụ na ụdị ejiji ọ bụla ị nwere ike iche. Ejiji ya ma ọ bụ nọrọ nkịtị, mpempe a zuru oke n'ọnọdụ ọ bụla na gburugburu ebe obibi. Nkọwapụta ...
Ndị nwoke padded jaket enweghị nke ọma mkpọchi pocke ...
Uwe nwoke a padded jaket bụ naanị ihe ị chọrọ maka oge oyi. Ike mkpuchi ihe dị ukwuu, ọbụlagodi na ọnọdụ iru mmiri. Ihe mkpuchi microfiber na-ekpo ọkụ ma dị fechaa jikọtara ya na akwa dị n'èzí-ọ dị mma maka ejiji kwa ụbọchị. Jaketị na-ekpo ọkụ nke nwere eriri na-agbanwe agbanwe na mkpuchi na mkpuchi na-egbochi ikuku. Emere uwe a na-arụ ọrụ ndị nwoke a wee mepụta ya iji nweta ọrụ dị mma yana ezigbo ọrụ, na-enye gị ohere ịme nke kachasị mma mgbe ị na-ekpori ndụ dị ukwuu ...
inyom padding n'èzí jaket 8218394 wa ...
Jacketmụ nwanyị na-eyi jaket n'èzí na-eme ka ị kpoo ọkụ. Ihe na-egbochi mmiri, ikuku na ikuku mkpuchi maka jaket snow bụ igbochi mmiri mmiri ozuzo. Mgbanwe ikuku mmiri ozuzo na eriri na-agbanwe agbanwe na-enyere aka ikuku ikuku.Nke ohuru na-eme ka uwe ahụ dị elu ma mara mma .Ọ zuru oke maka mmemme a na-eme n'èzí. Atụmatụ: 1. Fabric: akwa shei: ọkachamara mmiri na-asọ oyi, akwa akwa: 100% polyester / flece. 2.Waterproof & windproof: High-tech polyester ákwà na-eme gị ahụ akọrọ na-ekpo ọkụ ...
jaket mmiri na-enweghị mmiri nke ụmụ nwanyị 9220501-2-6
Jacketmụ nwanyị na-ekpuchi jaket na-ekpuchi windo na-egbochi ikuku. Uwe mkpuchi shei na-eme ka mmiri kpoo gị nke ọma na mmiri ozuzo na snow .Detachable oké ifufe mkpuchi na eriri na kemeghi cuffs tinye ọkụ .High mma ndochi na-eme ka ị dịkwuo ọkụ .Nke a zuru oke maka ime ụlọ na ime ihe omume. Atụmatụ: 1. Fabric: akwa shei: ọkachamara mmiri na-asọ oyi, akwa akwa: 100% polyester / flece. 2. Waterproof: akwa jaket nke oyi nke ụmụ nwanyị na-eme ka mmiri na-egbu ume, na zipa niile bụ ...
Nwanyị faux aji kootu WARMY
A na-eji akwa aji ajị ajị anụ ụmụ nwanyị nwere ajị anụ aji Faux Fur. Jaket ajị anụ ahụ na-ekpo ọkụ ma nọgide na-abụ onye siri ike ọbụlagodi ihu igwe kachasị njọ na uwe mkpuchi okomoko a. Ọ bụ ihe dị mma na gburugburu ebe obibi.Hood na Elastic cuffs nwere ike igbochi ifufe. Ọ bụ ihe nkịtị ma hụkwara ya site na mgbakwasa, ọ bụ ihe nwere ọtụtụ mmegharị. Zuru okè egwuregwu na ọkacha mmasị gị nịịka, leggings, nwa slacks, denim jeans, wdg Specificatio ...
Women'smụ nwanyị na-enweghị mmiri snow Jacket NL0039KI-F
Uwe mkpuchi ụmụ nwanyị na-ekpuchi mmiri na-enweghị mmiri na ikuku. Ọkachamara nke na-asọ oyi, mmiri na-adịgide adịgide na akwa na-adịgide adịgide na-ekwe nkwa njigide okpomọkụ kachasị mma, Ọ na-alụ ọgụ ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe. Ikwupụta ihu igwe nwere ike iwepu nwere ike wepu ikuku ma wepu obi. Styledị ezumike dabara adaba na ngwa ngwa-akọrọ. Akara mbipute na-egosi akara aka na igbe aka ekpe. A na-eji ya maka ịgba ọsọ sista, Snowboarding, Snowsports na egwuregwu ndị ọzọ dị n'èzí. Nkọwapụta ...
Anyị agwụla ma gafere afọ a BSCI ụlọ ọrụ nyocha. Anyị niile maara na asambodo BSCI baara ụlọ ọrụ ahụ uru: 1. Mezuo ihe ndị ọbịa chọrọ. 2. Otu asambodo maka diff ...
1. The cationic ákwà nwere ezigbo mma mmiri absorption na ya dyeing tank dị iche bụ dịtụ obere, n'ihi ya, ọ bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na egwuregwu uwe, tumadi mere ka sweatshirts, sweatpants, ...
Site na mmụba nke mmata ndị mmadụ banyere nchebe gburugburu ebe obibi na ọganihu nke teknụzụ, akwa ndị a na-emegharị abanyela na ndụ anyị. Anyị ụlọ ọrụ na-eji recycled akwa t ...
Jaketị na-agba ọsọ, Jaketị Ski, Gwara mmanụ Jacket, Jaketị Ski ụmụaka, 80s Ski Jacket, Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ,